Hargeysa: Sannado Ka Dib Oo Xiyaradii Laga Qaaday Wargeyska Haatuf | Gacanlibaaxnews
Hargeysa: Sannado Ka Dib Oo Xiyaradii Laga Qaaday Wargeyska Haatuf
July 8, 2018 - Written by C M
Hargeysa (GLN): Maxkamadda rafcaanka ee gobolka Maroodijeex ee Hargeysa, ayaa go’aan ay maanta soo saartay waxa ay shaacisay inay xayiraadii ka qaadday, isla markaana ay ruqsadii soo bixitaanka u soo celisay wargeyska Haatuf ee ka soo bixi jiray Hargeysa. Kaas oo muddo ka badan afar sano xayirnaa.
Guddoomiyaha wargeyska Haatuf Yuusuf Cabdi Gaboobe oo la hadley idaacadda BBC-da laanta af soomaaliga, ayaa yidhi: “Caddaaladdii aan tabeynnay ayaa dhacday. Maxkamadda racfaanku na waxay qaadday xayiraaddii saarnayd tan iyo bishii April 2014.”
Yuusuf Cabdi Gaboobe
Waxa uu intaa ku daray in muddadaas afarta sano ah ay iyaguna xirnaayeen labada wargays ee kale ee ku soo bixi jiray luqadaha Ingiriiska iyo carabiga, Somaliland Times iyo Al Haatuf al Carabi, ‘oo wax xukun ah uusan ku dhicin: “Xaruntii aan ka soo saari jirnay ciidan ayaa la wareegay illaa maantana jooga,” ayuu yidhi Yuusuf.